Omlet အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（36.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Omlet: Live Stream & Recorder
OMED Arcade သည် Awesome ဂိမ်းများကိုအတူတကွကစားရန်နေရာဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိလူတို့နှင့်အတူကမ္ဘာကြီးကိုတည်ဆောက်ရန် Minecraft Multiplayer ကစားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်း virtual network ကိုအသုံးပြုပါ။
သင်၏ Gaming အချိန်များကိုသင်၏ဂိမ်းများကိုတိုးတက်စေရန်မိတ်ဆွေသူoodsားနှင့်ကျယ်ပြန့်သောမိတ်ဆွေအသစ်များနှင့်စမ်းချောင်းအသစ်များနှင့်အတူစီးဆင်းပါ။ မိုဘိုင်းဂိမ်းများအားလုံးကိုထောက်ခံအားပေးပြီးမော်ကွန်း, Pubg, Free Fire, Call of Duty, Brawl Stars, Minecraft ကြယ်များ, Minecraft ကြယ်များ, Omlet နှင့်အခြားလူကြိုက်များသောဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းများ (Facebook, YouTube, Twitch, Nimo TV တို့ပါ0င်သည်) ။ အခြား gamers များနှင့် streamers များနှင့်တွေ့ဆုံရန်, အတူတကွကစားပါ။ အင်္ဂါရပ်ပေါ်လွင်ချက်များ:
MINECRAFT MUSTROFTER MODICK
MINECRAFT Multiplayer Mode သို့ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ Multiplayer mode ကို။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်တီးသူများ၏အသိုင်းအဝိုင်းမှကမ္ဘာသစ်နှင့် mod များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။
သင်၏ဖန်တီးမှုများကိုမျှဝေပါ။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်အခြားဂိမ်းများနှင့် streamers များနှင့်ပူးပေါင်းပါ။
Mobile Esports ပြိုင်ပွဲများ
* Mobile Esports ပြိုင်ပွဲများ
Mobile assports ပြိုင်ပွဲများ လတ်တလောအင်္ဂါရပ် - esports ပြိုင်ပွဲ!
OFFPROSS ပြိုင်ပွဲများ (လက်ရာများ) Mlbb, Pubg, Pubg, CODM, Brerbl Stars, Brerbl Stars, Minecraft ကြယ်, Team သည်ပျော်စရာကောင်းပြီးသင်၏ကျွမ်းကျင်မှု, အနိုင်ရဆုဖလားများနှင့်အခြားဆုလာဘ်များကိုပြပါ!
Easy Registits-Team Invise codes
- အော်တိုအဖွဲ့များ Gatr>
မိုဘိုင်း esports များသည်ဘယ်တော့မှမလွယ်ကူပါ။ Live Stream နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ပြိုင်ပွဲများတွင်ကစားပါ (stream sniping ကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်မျှတသောယှဉ်ပြိုင်မှုကိုရှောင်ရှားရန်စီးဆင်းမှုကိုသုံးပါ။
- အကန့်အသတ်မရှိ, အကန့်အသတ်မြင့်မားသော rutherution မိုဘိုင်းနှင့်အခြားလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများ (twitch, YouTube, Facebook, Nimo TV တို့အပါအ0င်အခြားလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများ (twitch, YouTube, Facebook, Facebook တို့ပါ0င်သည်) ဘောင်
စွမ်းဆောင်ရည်စွမ်းဆောင်ရည်အစီရင်ခံစာများ (Omlet, Twitch, YouTube, Facebook)
- Colorforfic Live Streaming Messager
- စိတ်ကြိုက်ခင်းကျင်း, Omlet, Facebook, YouTube, Twitch သို့မဟုတ် Nimo TV တို့အားအခမဲ့ Live Streams
(Android 5.0 နှင့်အထက်) -1 streamer သို့မဟုတ် esports လိုလားသူကစားသမားနှင့်အတူဂိမ်းကစားခြင်း! သင်၏ဂိမ်းကိုသင်ကစားခြင်းကိုလုပ်ပါသို့မဟုတ်အကြိုက်ဆုံး streamer နှင့်အတူပုဂ္ဂလိကအချိန်ဖြုန်းပါ။
သင်၏ Live Stream ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါ။ ထိပ်တန်း streamer!
* In-app ငွေကြေးနှင့်လှူဒါန်းမှုများ
သင်အကြိုက်ဆုံး streamers နှင့် gamers များကို Omlet Tokens နှင့်လက်ဆောင်များဖြင့်ထောက်ပံ့ပါ။ အထူး streamer subscriptions များနှင့်အတူ streamer sponsors ဖြစ်လာသည်။
ကစားသမားတစ် ဦး ကိုဖန်တီးပါ။ သူငယ်ချင်းများကိုဖိတ်ပြီးသူငယ်ချင်းများအတွက်အတူတကွစီးဆင်းပါ။
Mobile esports အသိုင်းအဝိုင်း
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော streamer မှစီစဉ်ထားသည့်ရပ်ရွာလူထုနှင့်အတူကစားခြင်းသို့မဟုတ်မျိုးနွယ်စုများတွင်ယှဉ်ပြိုင်နေသောလိုလားသူကစားသမားများကိုကြည့်ပါ။
Real-time Group CHATK
In- ညှိနှိုင်းရန် သင်၏အသင်းနှင့်ဂိမ်းတိုက်ခိုက်မှုများသို့မဟုတ် Gaming The Gaming The Gaming Create Game Commer Growlay အကြောင်းပြောဆိုခြင်း။
, Brawl ကြယ်များ, Minecraft, Call of Duty စသည်ဖြင့်), သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာ, anime, animeplay, သင်၏ gameplay ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း, Gaming အချိန်လေးများနှင့်သူငယ်ချင်းများ, အသင်းဖော်များနှင့်အခြားဂိမ်းကစားသူများနှင့်မျှဝေပါ။
Omlet Arcade: Live stream and Recorder app Overview
HOW TO LIVE STREAM IN MOBILE LEGENDS WITH INTERNAL AUDIO+MIC+VOICE TEAMMATES 2020
How To Omlet Arcade Live Stream On YouTube | Omlet Arcade live stream youtube
Tech with Jitendra
কিভাবে Omlet Arcade দিয়ে Free Fire, Pubg সহ সকল Game Live Stream করবেন??
Gaming With Sujon
How To Stream PUBG Mobile Live From Your Any Android Phone ! With Internal & External Audio
I like omlet ☺ I like it
The Player Crafter The Enderman Myanmar